HQX File (Ihe Ọ Bụ na Otu esi emepe otu)
Kedu ihe bụ HQX File?
Otu esi emeghe, dezie, & tọghata faịlụ HQX
Otu faịlụ nwere ndọtị HQX bụ faịlụ Macintosh BinHex 4 compressed archive nke eji echekwa ọnụọgụ abụọ nke ihe oyiyi, akwụkwọ, na faịlụ multimedia. Ha na - eji .HEX na .HCX mgbati.
BinHex pụtara "ọnụọgụ abụọ na-hexadecimal." A na-eji usoro a iji chekwaa ọnụọgụ ọnụọgụ asatọ-bit na ntinye ederede 7-bit. Ọ bụ ezie na ọkwa ha dị ukwuu, a sịrị na nrụrụ aka na-adịtụghị ka faịlụ ndị a zọpụtara n'ụzọ dị otú a, nke mere na a na-ahọrọ faịlụ HQX mgbe ị na-ebufe data n'elu email.
Ihe ederede na BinHex nwere ike inwe aha njirimara dị ka file.jpg.hqx iji gosi na faịlụ HQX na-ejide faịlụ JPG .
Esi mepee HQX File
A na-ahụkarị faịlụ HQX na usoro MacOS - ị nwere ike ịmepụta Bee Archiver ma ọ bụ ihe nchekwa Apple na-eme n'ime oghe HQX faịlụ.
Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ Windows ma na-achọ ịdepịa faịlụ HQX, gbalịa WinZip, ALZip, Deluxe Deluxe, ma ọ bụ ihe ọzọ na-ewu ewu na faịlụ na Windows.
Altap Salamander and the Web Util's online BinHex Encoder / Tool Decoder bụ nhọrọ abụọ ọzọ ma ọ bụrụ na ọ nweghị nke n'elu ga-emeghe faịlụ HQX.
Ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi ụfọdụ ihe ị na-ejighị n'aka ma ọ bụrụ na faịlụ a gbanwere na BinHex, ị nwere ike iji nchịkọta ederede n'efu iji chọpụta na akara nke mbụ gụrụ " (A ghaghị ịgbanwe faịlụ a na BinHex 4.0) ".
Rịba ama: Ọ bụrụ na ịnweghi ike mepee faịlụ HQX gị, ị nwere ike ịdị na-atụgharị nchịkọta faịlụ ahụ. Ụfọdụ faịlụ na-ekekọrịta mkpụrụ akwụkwọ nkịtị na nchịkọta faịlụ ha, dị ka QXP (QuarkXPress Project) na faịlụ QXF (Ndenye dị mkpa maka Mac Exchange) faịlụ.
Ọ bụrụ na ịchọta na ngwa dị na PC gị na-anwa imeghe faịlụ HQX ma ọ bụ ihe na-ezighị ezi maọbụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwe usoro mmemme ọzọ a na-emeghe faịlụ HQX, lee otú anyị ga- esi gbanwee Mmemme Nzuzo maka ntuziaka nchịkọta faịlụ dị iche iche maka ime mgbanwe ahụ na Windows.
Esi gbanwee HQX File
Ebe ọ bụ na faịlụ HQX bụ ụdị usoro archive dịka ZIP ma ọ bụ RAR , ị ga-ebu ụzọ mepee ebe nchekwa ahụ tupu ị nwee ike ịmegharị faịlụ ọ bụla n'ime.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere faịlụ PNG n'ime faịlụ HQX ịchọrọ ịtụgharị na JPG, kama ịgbalị iji tọghata faịlụ HQX archive na faịlụ JPG ozugbo, jiri naanị ngwaọrụ sitere n'elu nke nwere ike imeghe faịlụ HQX. . Ozugbo i meghere ya, ị nwere ike wepụ PNG ma weghaa onye na- agbanwe agbanwe faịlụ iji tọghata PNG ka JPG ma ọ bụ ụdị faịlụ ọzọ.
Otu echiche ahụ bụ eziokwu ma ọ bụrụ na ịnwa ịmegharị HQX na ICNS , ZIP, PDF , wdg - wepụ ọdịnaya nke HQX archive mbụ, wee jiri onye na-emegharị faịlụ na faịlụ ndị a kpọpụtara.
Inyekwu Aka na HQX faịlụ
Hụ Nweta Enyemaka Ndị Ọzọ maka ịmatakwu m na netwọk mmekọrịta ma ọ bụ site na ozi-e, na-eziga na forum tech support, na ndị ọzọ. Mee ka m mara ụdị nsogbu ị na-enwe na imeghe ma ọ bụ na-eji faịlụ HQX ma m ga-ahụ ihe m nwere ike ime iji nyere aka.
Kedu ihe bụ PBM File?
Kedu ihe bụ MSR File?
Kedu ihe bụ PNG File?
Kedu ihe bụ WLMP File?
Kedu ihe bụ DDL Njikwa?
Kedu faịlụ DMC?
Kedu ihe bụ MDA File?
Esi emeghe, dezie, ma tọghata faịlụ AXX
Kedu ihe bụ XML File?
Onyinye Onyinye Onyinye Kasị Mma Ịzụta Ahịa na 2018
Esi tinye Ntinye RSS gaa na ibe Weebụ
Chebe Ozi Ịntanetị gị: 5 Nzọụkwụ Ị Pụrụ Iwere Nzuzo Ugbu a
Etu esi malite Instagram Live Video
Nke a bụ Ntak Apple TV bụ Nzuzo zuru oke maka Millennial TV
Otu esi eji Lakka kpoo vidio vidio na Windows PC
Oghere ahụ: Ngwa ngwa Mac na-eji ihe nkwụsị
Otu esi achọta foto maka ibe weebụ
Olee otú Archive Thunderbird Mail akwụkwọ nchekwa
Kedu ihe bụ BMP ma ọ bụ DIB File?
Tinye ụda okirikiri na Ozi Email na IncrediMail
Azịza ya: Gịnị mere enweghị m ike iziga ozi Facebook na My iPad?
7 Ụdị Ntugharị Ịntanetị ka Ị Tụlee
My iPhone ihuenyo agaghị agbanwe. Kedu ka m ga-esi dozie ya?
Ụgbọaka nke Google "Moonshot"
Nduzi na Tablet Na-egosiputa
Lyn: Ngwa Ngwa Ngwa Ngwa na OS X
Atụmatụ kachasị maka Atụmatụ Ntanetịime Ụlọ Ntanetị
Mee njem mkpado Safari na iPhone gị ma ọ bụ ihuenyo ihuenyo iPod
Nyochaa okwu Bluetooth na V5BT wrenz
Esi gosi Ngosipụta ozi na ndepụta Mac os X Mail